Ukuthwasa kwenyanga ngoDisemba: Ukusithwa kwelanga ngokupheleleyo kunye nokuGagasi kweThemba - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Ukuthwasa kwenyanga ngoDisemba: Ukusithwa kwelanga ngokupheleleyo kunye nokuGagasi kweThemba
Inyanga entsha ngoDisemba eSagittarius ingqamana nokusithwa kwelanga yinyanga konke okuthetha ukuba umsitho unamandla ngakumbi kunesiqhelo. Luya kuchaphazeleka njani uphawu lwakho lweenkwenkwezi?
Inyanga eNtsha eSagittarius nge-14 kaDisemba, izakukhokelela kulangazelelo kunye nokuzonwabisa. Iya kusenza sizithembe ngakumbi ekufezekiseni iinjongo zethu, kunye nokuvuselela iminqweno yethu kunye namabhongo, ngelixa lisikhuthaza ukuba senze. Ukuthatha inyathelo ubuye umva ngokuqinisekileyo akuyi kubakho mbuzo kuba lo msitho ubhangqwe kukusithwa kwelanga y langa kukwaqinisa imfuno yethu yenkululeko kunye nomnqweno wethu wokubeka ulonwabo lwethu phambili. USusan Taylor utyhila indlela uphawu ngalunye lwe-zodiac oluya kuchaphazeleka ngayo kwesi siganeko senyanga.
Yintoni esinokuyilindela kwinyanga entsha ngoDisemba?
Kwenzeka ntoni xa iNyanga eNtsha ikwiSagittarius?
Inkwenkwezi yakho ekhethekileyo yenyanga
-NgoMvulo, nge-14 kaDisemba, iNyanga eNtsha yenzeka nge-23 ° ukusuka kumqondiso weSagittarius nge-11: 14 AM EST -
Yintoni esinokuyilindela kwiNyanga eNtsha kaDisemba?
Nge-14 kaDisemba ngo-2020, i Inyanga entsha ikwasibekela kwelanga ngokupheleleyo. Xa ukusithwa kwelanga ngokupheleleyo kwenzeka, iNyanga ibekwe phakathi koMhlaba neLanga ngalo mzuzu xa uMhlaba, iNyanga kunye neLanga zilungelelaniswe ngokugqibeleleyo. Inyanga ke ngoko ifihla iLanga ngokupheleleyo. Ngexesha lokusithwa kwelanga yinyanga, kufuneka sikulumkele nangakumbi malunga noko sikuhlwayelayo kuba inokuba neziphumo ezinzulu kunangexesha lokuthwasa kwenyanga yakudala. Ngoko ke masibize ubulumko bethu bangaphakathi namandla ukuze singenzi ngendlela egwenxa neyenzakalisayo. Endaweni yoko, kufuneka sigxile ekuhlwayeleni imbewu elungileyo ukuze sivune izibonelelo kamva. Ngale nto engqondweni, masibe ngakumbi nakwabanye kwaye sinengqiqo kwiimpendulo zethu.
Ngexesha leNyanga eNtsha, iLanga kunye neNyanga zilandela enye kwenye, kwinqanaba elifanayo le-zodiac, ke kukudibana kwelanga / kwenyanga.
Ukuchaphazeleka kwenyanga kwi-Sagittarius kunefuthe lini kuthi?
Inyanga eNtsha kwi-Sagittarius kunye nokusithwa kwelanga ngokupheleleyo lilanga kudityaniswe neMercury kwi-Sagittarius, yona kanye kwi-trine ngqo kwi-Mars kwii-Aries. Ezi Ukuhamba kweeplanethi kuya kuqinisekisa ukuba ubukrelekrele kunye nokwenza intshukumo kunye ukulungiselela ukufezekisa iziphumo ezilungileyo. Eli candelo lisenza sidlamke, sithandeke, sithandeke kwaye lisibonelela ngobuqili bobuchwephesha kunye nengqondo entle. Sinokulindela ukuba sibe njalo sikholisa ngakumbi kwiingxoxo zethu kwaye ndinomdla ngakumbi xa kufikwa ekuvakaliseni izimvo zethu. Le Nyanga intsha kwi-Sagittarius isenza Yandisa ngakumbi, inethemba ngakumbi kwaye ishushu.
INyanga eNtsha ikwerekwere, ke ngoko kukungavisisani neNeptune ePisces. Eli nqaku libonisa ukuba kunokwenzeka ukuba sihlaselwe ziimvakalelo zethu ngalo lonke usuku lwenyanga. Siphinde siqaphele kwesi sibhakabhaka indawo yokulala ngesondo phakathi kweVenus eScorpio kunye neJupiter-Saturn eCapricorn, ezibonisa ukuthanda ukuba semoyeni!
Eli candelo lisinyanzela ukuba sifezekise iminqweno yethu yothando kwaye sikhohlise abo sibatyumza. Esi siganeko senyanga simema ukuba sikhulule kwaye sibeke ulonwabo lwethu kuqala, ke khumbula ukwenza kanye le nto ikwenza uzive ulungile.
> Nxibelelana nehoroscope yakho engama-2021 apha<
Ukuthwasa kwenyanga kwinyanga yoMnga
Wonke umntu uyachaphazeleka kulo mjikelo, kodwa ezona mpawu zibalulekileyo zodiacac Sagittarius, Aries, Leo, Aquarius, Gemini, Libra, Scorpio, Capricorn kunye nePisces.
Nceda qaphela: Uya kuchaphazeleka ngakumbi kwesi siganeko ukuba uphawu lokunyuka sele ikhankanyiwe.
Ngaba i-scorpio kunye ne-capricorn ziyahambelana
Ukuqinisekisa ukuba awuphosi naziphi na izigaba zenyanga, jonga eyethu Ikhalenda yeNyanga ye-2020, kunye nokufumana ukuba yintoni elindileyo, skrolela kwisilayidi yethu.
Ukuya phambili nangaphezulu
Esi siganeko senyanga sikunika Inkuthazo yokuqhubela phambili kwiiprojekthi zakho Kwaye, unokukukhuthaza ukuba ujonge iinkqubo zoqeqesho.
Lungiselela ukuthanda okuninzi
Uya kuthatha inyathelo kufutshane neqabane lakho kwaye unokuphinda wenze kwakhona idangatye lakho. Vumela inkanuko ilawule!
Ngokobuchwephesha, ikhontrakthi entsha inokubonakala kwaye ungade banikwe ubuhlakani obutsha nomntu okhuthazayo kakhulu.
Izinto zijonge phezulu!
Uvuyo luya kuphuphuma kwaye wenze ubudlelwane bakho nosapho lwakho kwaye ngakumbi abantwana bakho ukuba buhle ngakumbi.
Uya kufuna ukuqala usapho okanye ukongeza isongezo esitsha kuyo! Lilonke, uya kuziva uzolile ngakumbi kwaye unamandla xa usiya phambili kwiihambo eziqhelekileyo. Fumanisa ukuba zeziphi iimpawu ze-zodiac ezinokuthi zikhulelwe ngo-2021.
Utshintsho lukho kuyo yonke indawo
Esi siganeko senyanga siza uhombise ubomi bakho basekhaya. Ubudlelwane bakho nabantwana bakho buya kukhula bomelele kwaye ukuba awutshatanga, yamkela ithuba lokudibana nomntu omtsha.
Uya kuziva ulunge ngakumbi kunakuqala
Uya kuba nokuzithemba okumiselweyo ukukhohlisa ukutyumza kwakho. Oko bekutshiwo, umntu unokuvuma iimvakalelo zabo zothando kuwe.
Uya kunika ngakumbi
Lo msitho uza kuthi gcwalisa intliziyo yakho ngothando ngakumbi. Unesisa kwabo bakungqongileyo ngakumbi kwiqabane lakho!
Inyanga eNtsha ikunika umnqweno wobukhulu, ikuvumela ukuhlangabezana neminqweno yakho kunye nokuqalisa ishishini elisondele entliziyweni yakho. Uya kuziva uzithembile kwaye unomdla kunakuqala!
Uya kuphefumlelwa vuthulula ukungakhathali kwakho ukuze uphume kwigobolondo lakho ukuze uqonde iminqweno yakho. Ulonwabo lufanelwe kwimeko yakho.
Ukuchola amaphupha amadala
Uya kuziva ukhuthazeka ukuba uqale okanye uvule iprojekthi okanye nokuba uqhagamshelane nomhlobo wakudala. Ukubonelela ngezihlandlo phakathi kwabahlobo abonwabileyo, ukuhlangana okufudumeleyo okufudumeleyo kunye nokuthembisa.
Ixesha lomsebenzi omtsha?
Inyanga eNtsha kaDisemba kungenzeka ikunike utshintsho lobungcali. Ukulandela ukuphoxeka, umceli mngeni omtsha uyakukhuthaza. Ngayiphi na imeko, unazo zonke izixhobo ezandleni zakho ukufezekisa iminqweno yakho!
Nazi izinto ezili-15 ezothusayo malunga neGemini
i-leo kunye ne-capricorn iyahambelana
iqala nini igemini
Kutheni ukophula isipili ngamashwa
intsingiselo yokomoya engama-777 kwibhayibhile
Ingelosi inombolo 1010 uthando